Afrikaan.so | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha | Page 2
Filimmada anshax xumada leh ee qaawan waa sun iyo la dagaalanka xagga maskaxda oo lagu soo dhex faafiyey bulshada caalamka. Qofka caadeysta daawashada filimmadaan xun-xun wuxuu halis ugu jiraa dhibaatooyin badan. Waxay baabi’isa naxariista, waxay dhalisaa rabshadaha bulshada sida kufsiga, waxay dishaa jaceylka ay isu qabaan labada qof ee isqaba iwm. Su’aal kama taagna in fiirsashada filimmada galmada ah ay noqon karto isha khilaafaadka qoysaska qaar, maxaa yeelay qofka caaddeysta daawashada filimadaan waxaa soo gaara dhibaatooyin badan oo xagga damiirka iyo maskaxda ah. Maxaa loo aaneyn karaa kufsiga ku soo badanaya Soomaaliya? – Yaa isweydiiyey? Waxaa sare u sii kacaya …
Wiilka George Floyd “ma joojin karo daawashada muuqaalka Geeridii Aabahay”
Fiidiyowga gacanta lagu duubay ee geerida George Floyd, sarkaalka Derek Chauvin, wuxuu kusii haayay jilib qoorta dhabarkiisa ilaa sideed daqiiqo ilaa uu Mr. Floyd joojiyo hadalka ama dhaqaaqa. Geeridii lama filaanka ahayd ee George Floyd – oo maanta 47 jir noqon lahaa – waxay ahayd dhacdadii ku salaysaneed jinsiyad-naceylka iyo naxariisdarrada booliiska Mareykanka. Wiilka George Floyd, ayaa sheegay inuusan joojin karin daawashada muuqaalka daqiiqadihii ugu dambeeyey aabihiis oo nool. Quincy Floyd ayaa madaxiisa hoos u fooraariyey oo wejigiisa daboolay markii uu maqlay oohinta aabbahiis ee soo noqnoqda ee ah “Ma neefsan karo”. Wiilka ugu weyn ee Mr Floyd ayaa u …
“Hawlaha Aan Soomaaliya ka Wadno Goor Horeba Sii Socdeen” – Monica Juma
Wasiirada Gaashaandhigga Kenya, Monica Juma, oo wareysi siisay Wargeyska Nation ee saldhiggiisu yahay magaalada Nairobi, ayaa faahfaahin ka bixisay sababaha ku xiran in milatariga Kenya ee ku sugan Soomaaliya laga soo saaro. Juma ayaa meesha ka saartay warar dhawaanahanba la isla dhex marayay oo ku saabsanaa in Kenya ay qorsheyneyso sidii ay ciidankeeda uga soo saari lahayd Soomaaliya, waxayna sharraxaad ka bixisay shuruudaha ku xidhan tallaabo noocaas ah. “Runtii maba jiraan waxyaabo u baahan in la kala caddeeyo. Kenya waxay qeyb ka tahay waddamada ay ciidamadooda ku jiraan Amisom. Waxaan halkaas ku tagnay qaraar kasoo baxay Golaha Ammaanka ee Qaramada …
Cudurada dhimirka oo tabaaleynaya malaayiin dad ah caalamka sannad walba ayaa waayadan dambe cilmiga, aqoonta iyo daawayntiisu horumar xoog leh ka samayayeen waddamada horumaray. Xaqiiqduna waxay tahay in heerar isku dhow bani’aadamka soo wada maray taariikhihii hore, marka la fiiriyo hadba wixii laga rumaysnaa xanuunadan sababtooda iyo daaweyntoodaba ilaa waqtigan xaadirka ah. Wareemidda, tumaatida, dirirta iyo dhacdooyinka kale ee argagaxa lihi waxay qofka ku reebi karaan masiibo maskaxiyeed. Inkasta oo ay qofba heer waxyeeladu u gaarto misana waxa hubaal ah in ay jiraan qaabab loo maro ama lagu daaweyn karo. Qof kasta oo inaga mid ah mar-mar ayuu dareemaa kurbo …
Sidee Loola Macaamilaa Bahdilka Goobaha Shaqada?
Waxaa jira dhibaatooyin badan oo ka jira goobaha shaqooyinka kuwaas oo aan halkaan lagu soo koobi karin. Dadka qaar wey iskeega qancaan dhibaatooyinka kasoo wajaha goobaha shaqada ayagoo u cabsi qaba in shaqada laga ceyriyo ama ay iska aamusaan ayagoo ka cabsi qaba sharaf xumo keeni karta isqabqabsi. Laakiin bani’aadamka iskumid ma ahan ee qaar waxaa jira aanan u adkaysan karin isla markaana hadla ama dacwad ka gudbiya. Haddii laga fiiryo dhinaca caafimaadka ma ahan wax wanaagsan inaad dhibaato ku haysato aad iskeega aamusto, maxaa yeelay waa qayb weyn oo ka mid ah caafimaadkaaga jireed iyo maskaxeed. Waxayna keentaa diiqadda …
Qaxooti Badan oo Noorwiiji ah Ayaa Dhameeya Dugsiga Sare Marka La Barbardhigo Denmark iyo Finland
Afrikaan.so, October 11, 2020
Caruur iyo dhallinyaro oo asal ahaan ka soo jeeda dad qaxooti ah ayaa dhameysta dugsiyada sare ee dalka Noorway marka loo fiiriyo Denmark iyo Finland. Xogtaan waxaa lagu muujiyey dib u eegis lagu sameeyey xogta diiwaangelinta ee carruurta qaxootiga ah ee yimid Denmark, Finland, Noorway, iyo Sweden sannadihii 1986-2005. Daraasadda diiwaangelinta waa mid ka mid ah labada daraasadood oo cusub oo lagu sameeyay mashruuca cilmibaarista Nordic “Coming of Age in Exile” (CAGE) oo diiradda saaraysa caafimaadka, waxbarashada, iyo isku xirnaanta suuqa shaqada ee dhalinyarada qaxootiga ah. Daraasadda labaad ayaa ah sahamin tayo leh oo laga helay waayaha dhallinyarada qaxootiga ku …
Maxay Kala Yihiin Wadamada Iskandaneefiyanka ‘Scandinavian’?
Iskandaneefiyanka waa gobol ku yaal Waqooyiga Yurub. Wadamada Iskandaneefiyanka waa seddex boqortooyo oo kala ah Denmark, Noorway, iyo Iswiidhan. Wadamadaan waxay ugu yeereen wadamada Iskandaneefiyanka sababtoo ah jasiiradda Iskandaneefiyanka darteed. Sababta kale ayaa ah in wadamadan ay leeyihiin xiriir taariikhi, dhaqan, iyo afeed oo adag. Ereygan sidoo kale wuxuu ka yimid gobolka Scania (sidoo kale loo yaqaan Skåne), oo ah gobolka koonfureed ee ugu hooseeya Iswiidhan. Ereyga ‘Scandinavia wuxuu soo ifbaxay dabayaaqadii qarnigii 18aad intii lagu jiray dhaq dhaqaaqii luuqadeed iyo dhaqameed ee iskandaneefiyanka. Noorway iyo Iswiidhan waxay wadaagaan gobolka jasiiradda Iskandaneefiyanka oo dhererkiisu dhan yahay 289,500 mayl oo laba …
Tirada dadka ku dhintay qaarad ay ku nool yihiin hal bilyan oo ruux ayaa ka yar dadka ku dhintay waddanka UK oo kaliya, iyadoo waliba uu jiro farqi weyn oo u dhaxeeya hannaanka caafimaadka iyo qalabka loo adeegsado. Dalal badan oo ku yaalla Afrika ayaa lagu ammaanay inay olole fiican u sameeyeen hakinta fiditaanka fayraska corona, iyadoo xitaa la ogyahay inay adeegyadooda caafimaad aad u liitaan. Qaaradda oo ay ku nool yihiin in ka badan hal bilyan oo ruux ayaa laga soo tabiyay 1.5 milyan oo kiis, sida lagu shaaciyay xog kasoo baxday Jaamacadda John Hopkins. Tiradaas ayaa aad uga …